ओली पक्षमा तामाङ दम्पत्तीको प्रवेशपछि यी नेता तरंगित ! « Ok Janata Newsportal
ओली पक्षमा तामाङ दम्पत्तीको प्रवेशपछि यी नेता तरंगित !
काठमाडौं । नेकपा ओली पक्षमा प्रभावशाली नेता शेरबहादुर तामाङ र उषाकला राईको इन्ट्रिपछि केही नेताको मनमा चिसने पसेको छ । पूर्व एमालेमा माधवकुमार नेपालको कोटाबाट कानूनमन्त्री बनेका तामाङ अहिले पूर्ण रुपमा ओली कित्तामा उभिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिस्तारै आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउनका लागि विभिन्न अस्त्र प्रयोग गरिरहेका छन् । ओलीलाई यति छिट्टै दाहाल–नेपाल पक्षबाट दुई जना सांसद आफ्नो पक्षमा भित्र्याउँदा ठूलो सफलता मिलेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग युवा संघको भेलामा रिसाएका गृहमन्त्री र उनी समर्थक नेता कार्यकर्ताहरु तामाङ दम्पत्तीको इन्ट्रिले केही सशंकीत भएको ओली पक्ष स्रोत बताउँछ । यद्यपि शेरबहादुर तामाङले आफू अहिले मन्त्री बन्ने तयारीमा नरहेको बताएका छन् ।
तामाङको ओली पक्षमा प्रवेशपछि धेरैले खानेपानी मन्त्री बन्ने पक्का रहेको अड्कल गरिरहेका छन् । तामाङ मन्त्रीका लागि अब्बल मानिने नेता हुन् । उनी यसपूर्व कानून मन्त्री बनिसकेका छन् ।
तामाङ दम्पत्ती ओलीको मन्त्री अफरबाटै ओली पक्षमा भित्रिएको नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षको दाबी छ । यद्यपि दाहाल–नेपाल पक्षमा अहिले पनि बहुमत केन्द्रीय सदस्यको संख्या कायमै रहेको छ ।
नेकपामा लामो समयदेखि देखिएको विवाद अन्ततः फुटको दिशातिर अगाडि बढेको छ । दिनप्रतिदिन ग्राफ बढ्दै जाँदा नेता कार्यकर्तामा निराशा छाउँदै गएको छ । नेकपा मिलाउनुपर्ने पक्षमा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम लागेका छन् । तर, समग्र सिनारियो हेर्दा नेकपा अब तत्काल जुट्ने सम्भावना देखिदैन ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नै ओली कित्तामा उभिएपछि निकास दिन संकट पैदा भएको छ ।